तपाइँलाई नयाँ भाषा सिक्न सहयोग पुर्‍याउन आश्चर्यजनक संसाधनहरू
जबसम्म तपाईं नयाँ भाषा कसरी सिक्ने जान्नुहुन्छ, तपाइँ आधारभूत कुरालाई कभर गर्न र वर्षको कुनै पनि स्तरमा पुग्न कहिले पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईंले बिभिन्न माध्यम र स्रोतहरू प्रयोग गरेर तपाईंको लागि कार्य गर्ने विधाहरू फेला पार्नुपर्नेछ. किन? मानौं तपाईं व्याकरण सिक्नको लागि पाठ्य पुस्तक प्रयोग गर्नुहुन्छ, कसरी मानिसहरूलाई र शब्दावलीलाई अभिवादन गर्ने. तपाईंसँग "सभ्य" फाउन्डेसन छ, तर कसैले तपाइँसँग कुरा नगरेसम्म पर्खनुहोस्.
तपाईंले बुझ्नु पर्छ:
वास्तबमा, तपाईलाई पढाइमा मिलाउन सिफारिश गरिन्छ, लेख्न, सुनेर र बोल्दै साँचो भाषा सिक्न. एयरपोर्टमा जाँदा तपाईं एक वाक्यांश पुस्तकको साथ प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, तर त्यो हो हैन भाषा सिक्दै.
कसरी नयाँ भाषा सिक्ने र वास्तविक रमाइलो गर्ने
त्यहाँ धेरै स्रोतहरू छन् जुन तपाईं भाषा सिक्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - क निःशुल्क स्रोतहरूको धेरै. चाहे तपाइँ भाषा सिक्न कक्षा लिदै हुनुहुन्छ वा आफैंमा डाइभिंग गर्दै हुनुहुन्छ, निम्नलिखित आश्चर्य संसाधनहरू अमूल्य हुनेछ:
नेटफ्लिक्ससँग विदेशी भाषाका चलचित्रहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो भाषामा बन्द क्याप्शनको साथ हेर्न सक्नुहुनेछ. पूरै चलचित्र हेर्नु अक्सर नयाँ सिक्नेहरूको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, त्यसोभए तपाइँ चाहनुहुन्छ:
सानो सुरु गर्नुहोस् र या त सानो क्लिप वा चलचित्रको भागहरू हेर्नुहोस्.
प्रयास गर्नुहोस् र यी सेक्सनहरू अनुवाद गर्नुहोस्.
अडियो ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्.
तपाईंको उच्चारण सुधार्नको लागि तपाईंले सुन्नु भएको पछाडि दोहोर्याउनुहोस्.
आईट्यून्स ट्रेलरहरू ट्रेलरहरूको एक राम्रो चयन छ जुन तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रहरूका लागि हेर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईंसँग मनपर्दो चलचित्र छ जुन तपाईंलाई हेर्न मनपर्दछ, सुरू गर्नका लागि त्यो एक उत्तम चलचित्र हो. जब हेर्दै, जस्तै साइट प्रयोग गर्नुहोस् केवल स्क्रिप्टहरू ताकि तपाईं सक्नुहुन्छ पढ्नु सँगै र वास्तव मा सामग्री शोषक.
जब तपाइँ शब्दहरू वा वाक्यांशहरूमा आउँनुहुन्छ जुन तपाइँलाई थाहा छैन, तिनीहरूलाई तपाइँकोमा थप्नुहोस् Anki वा मेमराइज सूची.
अडियोबुकहरु धेरै रमाईलो छन्, र तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा सुन्न सक्नुहुन्छ: कार, ट्रेन, बस, शहर वरिपरि हिंड्ने - कहीं पनि. तपाईं अडियोबुकहरू अफ किन्न सक्नुहुन्छ श्रव्य, वा तपाइँसँग तपाइँको स्थानीय पुस्तकालय को उपयोग को विकल्प छ.
धेरै पुस्तकालयहरू अब डिजिटल विकल्प छ, ओभरड्राइभ जस्तो, जसले तपाईंलाई लाइब्रेरीको स्वामित्वका eBook हरू र अडियोबुकहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ.
अडियोबुकका लागि केहि थप स्रोतहरू हुन्:
तपाईं अडियोबुकका साथ समान सुझावहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि तपाईंले अझ प्रभावकारी ढंगले सिक्न फिल्महरू पनि गर्नुहुन्छ. यदि तपाईं संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, पुस्तकको एक भौतिक प्रतिलिपि खरीद गर्नुहोस् ताकि तपाईं सँगै अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ.
त्यहाँ धेरै धेरै महान पोडकास्टहरू छन्, केहि निःशुल्क र केहि भुक्तान, यसले तपाईंलाई तपाईंको मनपर्ने भाषा सिक्न मद्दत गर्न सक्छ. कफी ब्रेक मेरो व्यक्तिगत मनपर्ने मध्ये एक हो र समावेश छ:
कफी ब्रेक स्पेनिश
कफी ब्रेक इटालियन
त्यहाँ पनि छ LanguagePod101 र सुस्तमा समाचार अरू धेरैमा. तपाईं आफ्नो फोनमा खोजी गर्न चाहानुहुन्छ, ट्याब्लेट वा पोडकास्टहरूको लागि अन्य उपकरण जुन तपाईंको लागि सब भन्दा चाखलाग्दो हुन्छ. यो सम्भव भएसम्म भाषाको अधिक सम्पर्कमा हुनु महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले केहि पोडकास्टहरू प्रयास गर्नुहोस् तपाईलाई मन पराउनुहुने वा ती रूचिमा तपाईलाई.
त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि तपाईं मनोरन्जन वा शैक्षिक उद्देश्यको लागि YouTube पहिले नै हेर्नुभयो. यूट्यूब पनि अन्तर्राष्ट्रिय हो, तपाईंलाई च्यानलहरूमा सदस्यता लिन र तपाईंको लक्षित भाषामा भिडियोहरू हेर्न अनुमति दिदै.
YouTube लाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न केहि सुझावहरू छन्:
प्रयास गर्नुहोस् र च्यानल अभिलेखहरू समावेश गर्ने च्यानलहरू फेला पार्नुहोस्.
प्रत्यक्ष स्ट्रिमि news समाचार च्यानलहरू फेला पार्नुहोस्.
तपाईंको लक्षित भाषामा भाषा सिक्ने च्यानलहरूको खोजी गर्नुहोस्.
भ्रमण गर्नुहोस् टेड र TEDx च्यानलहरू र विभिन्न भाषाहरूमा भिडियो खोज्नुहोस्.
TED का धेरै भाषाहरूमा च्यानलहरू छन्, त्यसोभए समय लिनुहोस् यदि त्यहाँ तपाइँको लक्षित भाषामा एक उपलब्ध छ कि छैन.
भाषा एक भाषा संग कनेक्ट गर्न को लागी सबसे महत्वपूर्ण तरीका हो. जबकि केहि संगीत विधाहरू बुझ्नको लागि गाह्रो हुन्छ, तपाइँको लक्षित भाषामा उत्कृष्ट संगीत फेला पार्न यो सम्भव छ. म द्रुत गतीका गीतहरू हटाउन कोशिस गर्दछु, जस्तै र्याप संगीत, किनभने तिनीहरू प्रायः शुरुवातकर्ताहरू बुझ्नका लागि द्रुत हुन्छन्.
स्लांग धेरै विधामा भर धेरै गीतहरूमा भारी उपस्थित हुन सक्छ, त्यसोभए यसले तपाईलाई गहिरो स्तरमा भाषा सिक्न मद्दत गर्दछ.
तपाईं मा गीतहरू पाउन सक्नुहुन्छ:
अब, तपाईं मनपराउने गीतहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ र मनपराउनुभएको साईट प्रयोग गर्नुहोस् गीत अनुवाद सक्कली गीत र अनुवादलाई साइड-साइड हेर्नका लागि.
बिस्तारी, गीतहरूको शब्दावली सिक्नुहोस्, गीतको अंशहरू सिक्नुहोस् र तपाईं अन्ततः प्रक्रियाको प्रत्येक पद बुझ्ने बित्तिकै गाउन सक्षम हुनुहुनेछ.
अब जब तपाइँ नयाँ भाषा कसरी सिक्ने जान्नुहुन्छ, समय बिताउनु हरेक दिन भाषा सिक्ने कोशिश गर्दै. सानो, लगातार सिक्ने सत्रहरु सधैं केही महीनाहरुमा एक पटक लामो सत्र भन्दा राम्रो हुन्छ.